Madaafiic ku dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaafiic ku dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho
December 23, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Irida hore ee madaxtooyada Soomaaliya (Villa Somalia).
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex madfac ayaa ku dhacay meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya maanta oo Sabti ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah oo ku sugan Muqdisho.
Lama oga khasaaraha ka dhashay madaafiicdaas ilaa iyo hadda.
Ciidanka ammaanka ayaa gudaha Muqdisho ka bilaabay howlgalo nabadgelyo.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaas madaafiicda ah, balse maleeshiyada hubaysan ee Al-Shabaab ayaa weeraro kan lamid ah qaaday.